आइफोन ७ पनि पड्कियो ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन १४, २०७३ समय: ८:३५:१४
एजेन्सी / सामसुङ ग्यालेक्सी नोट ७ पड्केको खबर सेलाउन नपाउँदै स्मार्टफोन बजारको हस्ती एप्पलमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। एक व्यक्तिले तस्बिरसहित आइफोन ७ पड्केको बताएपछि समाचारमाध्यममा यो चर्चाको विषय बनेको छ। उक्त व्यक्तिका अनुसार उसको साथीले आइफोन ७ अर्डर गरेका थिए तर पाउँदा प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा थियो। फोन पाउँदा जलेको अवस्थामा भएको उनले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यममा उल्लेख छ। तस्बिरमा फोन र बक्स जलेको देख्न सकिन्छ तर बक्सको अर्कोतर्फ च्यातेको पनि देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमका अनुसार यसबाट फोनको ट्रान्जिटमा केही भयो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर अफ भएका बेला यो पड्क्यो कसरी भन्ने बहस चलेको छ। ब्याट्रीमा समस्या भएको भए यो चार्जमा नभएर अफ अवस्थामा बक्समै हुँदा कसरी पड्क्यो?
त्यस्तै फोन पड्केको कसैले नदेखेकाले र यसबारे आधिकारीक पुष्टि नभएकाले यसमा विश्वास गर्न गाह्रो भएको बताइएको छ। त्यस्तै आइफोन ७ पड्केको यो पहिलो खबर भएकाले यसबारे यकिन तथ्य नआइसकेको बताइएको छ। योभन्दा अघि यस्ता समस्या आएका आइफोनमा कम्पनीको नभई प्रयोगकर्ताको गल्ती भएको पनि पाइएको थियो।